प्रमुख समाचार तीन दल अप्रजातान्त्रिक र युद्ध सरदार प्रवृत्तिका – नेपाल मजदुर किसान पार्टी
October 24, 2017 समसामयिक
भक्तपुर, ३० असोज। ‘तीन ठूला दलका अप्रजातान्त्रिक र युद्ध सरदार प्रवृत्तिका कारण जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन्। संसदको भूमिका हुन्छ र हुन्न भन्नेमात्र भयो। हरेक निर्णय तीन दलका शीर्ष नेता र तीनदलीय संयन्त्रले गर्ने भयो। संसद र अरू पार्टीका सांसदहरूले छलफल गर्ने र सुझाव दिने मौकासम्म पनि राम्ररी पाएनन्।’
उपर्युक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले सोमबार बिहान मेट्रो एफएममा पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जनसितको कुराकानीमा व्यक्त गर्नुभएको हो।
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदको अन्त्य भयो, –तपाई र तपाईंको पार्टीको अनुभव के रह्यो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो –’संविधानसभाबाट संविधान नै जारी गर्न नदिई असफल पार्न र विदेशबाट संविधान दिन खोजिएको थियो। त्यसलाई चिर्दै संविधानसभा आफैले संविधान निर्माण गर्‍यो, संविधानमा नेमकिपाको ७१ बुँदे असहमति हुँदाहुँदै हामीले त्यसलाई पारित गर्न साथ दियौं।
रूपान्तरित संसदको भूमिका चित्तबुझ्दो थिएन। सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि खुलेर छलफल नै गर्न दिइएन। सांसदहरूलाई बोल्ने समय ३ र ५ मिनेटमात्र दिने गरिन्थ्यो, त्यति समयमा त समस्याको विषयमात्र राख्दैमा जान्थ्यो, विधेयकमा प्रवेश गर्ने समय नै हुँदैनथ्यो। सदनमा शून्य समय, ध्यानाकर्षण र प्रश्नोत्तरको निम्ति समय नै दिइएन। विशेष समयमा उठाइएका विषयमा पनि सरकार र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखेनन्। कतिपय विधेयक त सदनको गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकै अवस्थामा पारित गरियो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लाचार र अकर्मण्य बन्यो, कुनै आवाज उठाइएन। हरेक निर्णय तीन दलको संयन्त्रले गर्ने तानाशाही पद्धतिको अभ्यास गरियो।
संसदमा बहुमत भएका पार्टीहरूले गरेको निर्णयलाई तानाशाही भन्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो – संसदमा बहुमत छ भन्दैमा मनपरी गर्न पाइन्छ भन्नु सही होइन। पूँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशका उदाहरणले नै प्रस्ट हुन्छ। संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा पूर्ण संसदमा नै व्यापक छलफल गराइन्छ भन्ने संरा अमेरिकामा संसदका विषयगत समितिहरूमा व्यापक छलफल गरिन्छ र सदनमा सामान्य छलफलपछि मतदानमा लगिन्छ र सदनमा सामान्य छलफलपछि मतदानमा लगिन्छ। तर, हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रणालीअनुसार काम गरिएन, गर्न दिइएन। संसदलाई महत्त्वहीन बनाउने दुष्कार्य शासक दलहरूबाट भयो।
ठूला दलहरूसित नेमकिपाका मतभेदहरू केके हुन्? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो – तिनीहरू पूँजीवादी पार्टी हुन् र नेमकिपा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सङ्घर्षरत छ। सैद्धान्तिक भिन्नतामात्र होइन अन्य धेरै विषयमा हाम्रो मतभेद छ। पहिले सदनमा प्राकृतिक स्रोत–साधनसम्बन्धी सम्झौता संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्ने बन्दोबस्त थियो। यी पार्टीहरूले विदेशीको मागअनुसार लगानी बोर्ड बनाए र त्यसले संसदलाई जानकारी नै नदिई प्राकृतिक स्रोत–साधन विदेशी सरकार र कम्पनीलाई दिनसक्ने भयो। लगानी बोर्डलाई नेपालको असीमित भूभाग सय वर्षसम्मको लागि विदेशी कम्पनीलाई लिजमा दिन सक्ने भयो। नेमकिपाले देशको स्वाधीनताविरोधी त्यस प्रावधान र लगानी बोर्डको विरोध गर्‍यो। सिंहदरवारमा विदेशी बैङ्क राख्ने, त्यसबाट कारोबार गर्ने कुराको पनि विरोध गर्‍यौं। त्यसले हाम्रा सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण विवरण विदेशीको हातमा पुगेको छ।
विदेशी सहयोग लिने कुरामा पनि नेमकिपाको असहमति रहेको बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेंले संसदलाई विदेशी पैसाले चलाएको, संसदको अफिसका मेच, टेबुल, टेलिभिजन राख्नसमेत विदेशी सहयोग लिएको र विदेशी सहयोगका सम्बन्धमा शासक दल र सरकारहरूले आफूलाई अघोरी बाबा नै सावित गरेको बताउनुभयो।
शासक दलहरूले थ्रेसहोल्ड लाडेर जनताको प्रतिनिधित्वमा रोक लगाउन खोजेको बताउँदै त्यसले नेमकिपालाई झन् बलियो बनाउने बताउनुभयो।
‘हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत शासक पार्टीहरू के हुन् भनी जनतालाई थाहा थिएन। थ्रेसहोल्ड लगाएर तिनीहरूले आफूले लगाएको प्रजातन्त्रवादीको मुकुण्डो च्यातेका छन्। जनतासामु उदाङ्गिदै छन्।’ अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो।